Zimbabwe – CFCA
Antisemitic incidents, Zimbabwe, תעמולה
Antisemitism and misinformation on the rise ahead of poll
Incidents of hate speech and suspected misinformation are on the rise as Zimbabwe heads ever closer to the July 31st election, with observers saying this 'psychological warfare' threatens any chance of a credible poll. The ...
An Antisemitic Newspaper Article
The Bulawayo Chronicle, which supports President Mugabe, published an article blaming the Jews for the present economic crisis in Zimbabwe. The article even claims that the Jews have conspired to destroy the Zimbabwean economy.
Zimbabwe’s President speaks out against Jews
During a visit to Bulawayo on 4 September, President Mugabe of Zimbabwe spoke out against Jewish businessmen, particularly textile dealers, and accused them of collaborating with South-African Jews to destroy Zimbabwe’s economy. In so doing ...
Zimbabwe – An Antisemitic Newspaper Article
In an article published in the Zimbabwe Sunday Mail, the journalist Samu Zulu claimed that the colonialist Cecil Rhodes (for whom Rhodesia, Zimbabwe’s former name, was named) was a Jew who “like other Jews ...
Zimbabwe – Antisemitic Comments by the President of Zimbabwe
Zimbabwe's President Robert Mugabe said in a television interview on So